Akkaataa walindhaaleen gara maddaalee deetaatti pooled ta'an qindeessa.
Faasiliitiin Walindhaalee akka waliindhaaleen ammaaf hin barbaachifne haqamaniif fayyada, yeroo gabaabaaf hin xuqamu. Yeroo sanatti yoo waliindhaan deetaa kun barbaadame, isaaf waliindhaa haaraan fayyaduu danda'a.
Walindhaa pool gochuu
Walindhaa pooling dandeessifame
Akka walindhaaleen filataman pooled ta'an ifteessa.
Ooftuuwwan LibreOffice keessatti beekaman
Tarree ooftuuwwan qindaa'ee fi deetaa walindhaa mul'isa.
Ooftuun ammee filatame jala tarreetti mul'ata.
Ooftuu kanaaf pooling dandeessisi
Ooftuu tarree keessaa filadhuutii sanduuqa Ooftuu kanaaf pooling dandeessisi walindhaa isaa pool gochuuf mallattoo itti godhi.
Yeroo sekoondii walindhaan pooled itti bilisa ta'u qindeessa. Yeroon jidduu sekondiilee 30 fi 3600 ta'uu danda'a.
Title is: Walindhaalee